Munaasibadii Xilwareejinta Haamaa Shiidaalka Berbera Oo Buuqa Isu Bedeshay, Badheedhihii Mayar Cabdishakur, Dhuumashadii Badhasaabka Saaxil Iyo Kala Hadalkii Wasiirada+Shirkadihii Lagala Wareegaayay Oo Madasha Ka Maqnaa | Berberatoday.com
Munaasibadii Xilwareejinta Haamaa Shiidaalka Berbera Oo Buuqa Isu Bedeshay, Badheedhihii Mayar Cabdishakur, Dhuumashadii Badhasaabka Saaxil Iyo Kala Hadalkii Wasiirada+Shirkadihii Lagala Wareegaayay Oo Madasha Ka Maqnaa
Munaasibadii xilwareejinta haamaa ee buuqa isu bedeshay ! badheedhihii duqa Berbera Iyo dhuumashadii badhsaabka saaxil ,iyo khalkhalkii wasiirada iyo maqnaashihii shirkadihii dhiigmiiratada ahaa ee BOG.
Berbera(Berberatoday.com)-saaka oo ku beegnayd maalintii loo qoodayey inay xukuumada somaliland haamaha shidaalka la wareegto ,ayaa waxaa haamaha shidaalka Berbera soo gaadhay wasiirka wasaarada Maaliyada ,Wasiirka Yuusuf Maxamed Cabdi wasaarada ganacsiga jsl Xasan Sacad Saajin iyo hanta dhawrha guud ee qaranka Somaliland Axmed Yuusuf dirir iyo xubno kale oo ay kamid ahaayeen xisaabiyaha guud iyo mareeyaha cusub ee Haamaha Shidaalka Berbera .
masuuliyiintana ayaa markii ay haamaha soo gaadheen waxay shir albaabadu uxidhan yihiin ay ku yeesheen hoolka shirarka ee ku dhexyaala xaruntaasi waxaa shirkaasi ka soo qaybgalay gudoomiyaha gobolka saaxil duqa Berbera iyo mareeyihii hore haamaha shidaalka Berbera iyo sidoo kale Cali waraabe oo ka socday shirkadihi haamaha laga qaaday .
kadib markii shirkaasi laga soo dareeray saxaafada oo irida hoolka taagnayd ayaa suaalo ku booday masuuliyiintii shirkaasi kujirtay , ugu horayn Duqa Berbera Cabdishakuur Cidin ayaa aanu waydiinay suaal ahayd mudane gudoomiye Haamihii maan la wareejinayn? Waxaa ku jawabay ‘’ amarka madaxwaynaha ayaa shaqaynaya oo waa lala wareegay haamihii qaranka sidaas ayaanu ku wareejinay manta haamihii oo xukuumadu kula wareegtay .
Mareeyihii hore ee haamaha shidaalka Maxamed Jaamac oo aanu suaal taasi lamid ah waydiinaya ayaa yidhi wali waxba lama wareejin.
Wasiirka maaliyaddda Yuusuf Maxamed Cabdi Iyo Wasiirka ganacsiga Saajin oo aanu iyagana suaashasi waydiinay ayaa iska daba yidhi manta way baaqatay cilad farsamo awgeed markaa bari baanu wareejinaynaa haamaha shidaalka Berbera hadalada masuuliyiintan ayaa ahaa kuwo kaaf iyo kala dheeri ah oo uu ka muuqdo khilaaf iska hor iyo daba imanaya taasi oo ay ka muuqato is burin coogani .
Jawi guud ee haamaha shidaalka Berbera ayaa saaka u muuqday kuwo aan la wareejinayn maalmaha fooda inagu soo haya waxaa meesha ka maqnaa sidoo kale shirkadihii soo maamulayey haamaha shidaalka ee ay xukuumadu kasoo celisay kadib markii ay diideen inay wareejinyaan hantida qaranka ee haamaha shidaalka Berbera balse xukuumada Somaliland ayaa dhankeeda balanqaaday in ay awood xukuumadeed kula wareegi doonto hantida qaranka ee lagu takrifalayey mudooyinkii udanbeeyey .
xukuumada ayaa qiimayn kadib ogaatay inuu hantida dawladu dhacan tahay kadib markii la ogaaday dakhliga kasoo baxayey haamaha mudadii shicibku gacanta ku hayey oo shan laab ka badnaa lacagtii ay ku kiraysteen haamaha qaranka